Iimarike ezihlumayo: zeziphi ezona zilungileyo zokutyala | Ezezimali
Ukuba ujonga enye indlela yokulingana, ngokungathandabuzekiyo yile yenziwe ziimarike ezisakhulayo. Ayisiyonto iqhelekileyo ukusebenza ekuthengweni nasekuthengisweni kwezabelo kwimarike yemasheya. Kodwa ukuba uvula izikhundla ngexesha elifanelekileyo kunokuba yeyona inenzuzo kuba ine ububanzi obuphezulu obunokubakho. Nangona kunjalo nakweyiphi na imeko ngaphandle kokulibala ukuba uthatha uthotho lweengozi eziphezulu kakhulu ezinokukwenza ukuba ushiye ii-euro ezininzi apha endleleni. Akumangalisi ukuba, ukuba awunawo amava awoneleyo kuyingozi kakhulu kuba ukungazinzi kwawo kucace gca kunakwimakethi yokulingana yemveli.
Ewe kunjalo utyalo mali kwiimarike ezisakhulayo inokuba sisisombululo xa kwiimarike zesitokhwe zamazwe ahambele phambili kwezorhwebo uptrend uphelile. Ngale ndlela, badlala indima yentengiso encedisayo apho ungafanelekanga wenze igalelo elikhulu lemali. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, iimali ziya kuba mbalwa njengefomula yokukhusela kwiintshukumo ezingalindelekanga kwezi marike zezemali.
Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba kwiimarike ezihlumayo kukho izindululo ezininzi kwaye ayizizo zonke ezifanayo. Kungenxa yokuba bavela kumazwe ahlukeneyo kangangoko banako China okanye India. Ngeziphumo ezahlukileyo, njengoko ubona ukusukela ngoku. Ngelixa kwezinye ukunyuka kuyamangalisa ngokwenyani, kokunye ukuwa kuveliswa ngogonyo olukhethekileyo njengoko kusenzeka ngalo mzuzu kanye. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni kufuneka wenze ngononophelo olukhethekileyo ukuba uza kuvula indawo kwezi ntsuku zimbalwa zizayo.
1 Iimarike ezivelayo: China
2 Izibonelelo zeemali zotyalo-mali
3 Imfuno eIndiya iyacotha
4 Iimarike zaseLatin America ziyaqhubeka
5 IRashiya inokumangaliswa
6 Olunye Utshintshiselwano ngeZitokhwe lwaseYurophu
Iimarike ezivelayo: China
Ukuba okwangoku kukho imakethi ye-equity ecacileyo, ngokuqinisekileyo akumelwanga ukuba imelwe yi China. Yeyona yeyona nto iphambili kuzo zonke ukusukela kwiinyanga zokuqala zalo nyaka ixabisile ngaphezulu kwe-10%. Ukukhokela iimarike ezisakhasayo ukuya kwinqanaba lokuba lelinye lamathuba amahle okuthenga ngoku. Nangona ukuthandabuza kulungiselelwe ukuba le meko inyukayo izakuqhubeka phi. Nangona kunjalo, yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba lo mzuzu usenokuhlala kwintsalela yonyaka. Apho, amandla okuthenga anamandla kakhulu, athabatha ithuba lobuthathaka beemarike zezabelo.
Ukusuka kule meko ngokubanzi, imakethi yesitokhwe yase China lelinye lawona mathuba mahle oshishino onawo ngalo mzuzu. Phakathi kwezinye izizathu, kuba iimarike zemali ezishiyekileyo azinakho isimilo esilindelwe ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuza kuthi ga ngoku Ukuhamba kwemali okunamandla kuyaphambukiswa kule ndawo ikhetheke kakhulu. Unokwenza imisebenzi ngokuthenga kunye nokuthengisa izabelo, kodwa nangezinye iimveliso zemali ezikhuselekileyo. Umzekelo, imali yotyalo-mali esekwe kule marike yaseAsia.
Izibonelelo zeemali zotyalo-mali
Ukutyala imali kwiimarike zezabelo zamaTshayina ngale modeli yotyalo-mali kubandakanya uthotho lwezibonelelo ekufuneka uzazi ukususela ngoku. Enye yezona zinto zibalulekileyo kukuba ukwimeko yokwahlula utyalo-mali lwakho ngokufanelekileyo. Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba olu tyalomali lunokudityaniswa nezinye iiasethi zemali. Ayisiyiyo kuphela kwii-equity, kodwa kunye nokulungiswa apho iimali zotyalo-mali ezaziwa ngokuba zii-mistos zenziwa. Kwaye bajolise kwiprofayili yotyalo-mali olinganiselayo okanye olondolozayo ofuna ukhuseleko olukhulu kwikomkhulu lotyalo-mali.
Olu didi lweemali zotyalo-mali lunelungelo lokuba baya ngokuthembela kwisibonelelo esinamandla ngakumbi kwiinkampani zolawulo ezizithengisayo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba ungabinangxaki yokugqithisela ibango lakho ngokuchanekileyo. Ukusuka kwiimali ezinobundlongondlongo ukuya kwabanye abakhusela ngakumbi kwaye ezo zizindululo zabo bonke abalamli bezezimali. Ewe kunjalo, ezi mali zizithuthi zokuhambisa le mfuno yoqobo kangangokuba imiselwe ukuba ithengise i-China. Ngaphezulu kwezibonelelo ezinye iimveliso zezemali ezikunika zona ngoku
Imfuno eIndiya iyacotha
Ukuba bekukho imarike evelayo ebime ngaphezu kwayo yonke le minyaka idlulileyo, ngokungathandabuzekiyo yindawo yentengiso yaseIndiya. Ngokuphononongwa okumangalisayo kwaye kwenziwe oosozigidi kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Nangona kunjalo, le meko yaphukile kwisiqingatha sokuqala se-2018 kwaye yajika. Ukuya kwinqanaba lokuba sele ikwindawo engathandekiyo xa unciphisa ixabiso malunga neepesenti ezi-5. Ngayiphi na imeko, akucaci ukuba kulungiswe nzulu kakhulu kwintengiso yemasheya okanye ukuba ngokuchaseneyo kungenxa yotshintsho kwindlela, njengoko kubonisiwe linani elikhulu labahlalutyi bezemali.
Imarike yemasheya eIndiya ngoku ibonelela iingozi ezininzi kwaye azilungelanga ukujongana nazo kuba kunemali eninzi ongayishiya endleleni ukuba uvula izikhundla. Enye into eyahluke mpela yindlela uguquko lwentengiso yemali olunokuba ngayo kwiminyaka embalwa. Kodwa ke, imeko yexesha elifutshane ayinakudimaza ngakumbi. Ezi zikhundla kufuneka zingabikho de kuphele unyaka njengoko ezinye iimarike zezabelo zichaza utyalo-mali.
Iimarike zaseLatin America ziyaqhubeka
Ubume beemarike zentengiso kule ndawo yejografi azilunganga nokuba. Ngokwengxenye ngenxa yeengxaki zoqoqosho kwinxalenye enkulu yamazwe abo. Umzekelo, IBrazil neArgentina apho ezona zalathiso zichaphazelekayo ziye zehla nge-10% kwisiqingatha sokuqala salo nyaka. Ukusuka kule meko, ezinye iimarike zezemali zizinto ekufuneka uphume kuzo kude kube sekupheleni konyaka. Umngcipheko nawo unamandla kwaye akukho nto unokuyizuza ngokuvula izikhundla kwezinye zeyona indices zibalulekileyo.
Ayisiyiyo kuphela iBrazil neArgentina ayingawo amazwe achaphazeleka kakhulu. Endaweni yokuba abo bakule ndawo bachaphazeleke kwaye abahambi kwelona xesha lilungileyo. Kuya kuthatha iinyanga ezininzi okanye iminyaka ngaphambi kokuba iphinde ibenenzuzo. Nangona kunjalo, yenye yezona zinto zithandekayo kwihlabathi Umahluko obaluleke kakhulu phakathi kwamaxabiso abo aphezulu kunye neyona isezantsi. Kwaye loo nto yenza ukuba kube nzima kakhulu kuwe ukuba ube neephothifoliyo engaphezulu okanye ezinzileyo yezokhuseleko. Ke ngoko, ayisiyiyo enye yezona zicetyiswayo ukusukela ngoku. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko.
Ngayiphi na imeko, enye yezimanga ezinokubakho zokuphela konyaka yimakethi yesitokhwe yaseRussia. Okwangoku Uhlaziyo lusondele kwi-4%. Oko kungomelezwa kwiinyanga eziseleyo ngaphambi kokuphela konyaka. Esinye sezizathu zokuchaza eli nyathelo kungenxa yokuhlaziywa kwexabiso leoyile. Akumangalisi ukuba le ntengiso ibalulekileyo ye-equity inxulunyaniswe ngokusondeleyo kwezi zinto zivelisiweyo nangaphezulu kweentengiso zentengiso. Ukusuka kule meko, ayisiyombono imbi ukuvula izikhundla ezihlazo kwimakethi yesitokhwe yaseSlavic. Ayothusi into yokuba ukuphononongwa kwayo ngokutsha yenye yezona zinto zibalulekileyo onokuzifumana njengangoku.
Kuyinyani ukuba ilawulwa ziinkampani zeoyile, Kodwa nezinye ezinxulumene negesi okanye ezinye iintlobo zamandla. Olunye ukhetho onalo ngoku lubonakala kwimali yotyalo mali kwaye inokuba ngumdla kakhulu ekuphuculeni iakhawunti yeziphumo zakho kwiakhawunti yokonga. Kodwa soze ngendlela enoburharha, kodwa kancinci kancinci kwaye ngononophelo oluthile ukunqanda iimeko ezingafunekiyo yinxalenye enkulu yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngayiphi na imeko, yenye yeendlela onokukhetha kuzo kwimarike yemasheya ekufuneka uyivavanye ukwenza ukonga kulondoloze ngendlela efanelekileyo.
Olunye Utshintshiselwano ngeZitokhwe lwaseYurophu
Kwelinye icala, kukwakho namanye amazwe kwi-Slavic orbit, kodwa edityanisiweyo ngaphakathi kwendawo ye-euro kwaye ebandakanya utyalo-mali olulawulwa ngakumbi. Zimelwe ziingxowa ezinjengezo IHungary nePoland ezinokuba neziphumo ezilungileyo kakhulu ukusukela ngoku. Ukuthatha umngcipheko omncinci kunakwimakethi ye-equity evelayo kwaye okwangoku ii-indices zabo zigcina imida kumanqanaba abo afanayo nalawo eemarike zentengiso zaseNtshona.
Ngoncedo lokuba inemali efanayo neyakho, i-euro. Ngale ndlela, awuyi kutshintsha imali ngeendleko ezilandelwayo kwiikhomishini zolu luvo. Ukongeza, ukungazinzi kulawulwa ngakumbi kunakwimarike yesitokhwe esakhulayo kuba zibandakanyiwe kwindawo eqhelekileyo yaseYurophu. Kuya kufuneka ubuncinci ulixabise olu khetho lubonelelwa ziimarike zemali. Ngokwazi ukuphucula iminqweno yakho ukusukela ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iimarike ezihlumayo: zeziphi ezona zilungileyo zokutyala imali kuzo